माननीय, सम्माननीयज्यहरुलाई नागरिकको चिठीे | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
माननीय, सम्माननीयज्यहरुलाई नागरिकको चिठीे
| 142 Views | Published Date : 23rd March 2018 |
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मान्य सदस्यज्यूहरु, सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार !
विजयी हुनुभए पश्चात्, औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट कार्यक्रम, आदिआदिमा प्रत्यक्षरुपमै भावविभोर हुँदै, खुशीको साथ वधाई तथा शुभकामना टक्र्याएकै थियौं ।
विजयी हुनुभएका आदरणीय नेताज्यूहरुबाट पनि शालिनतापूर्वक मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, साथै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उचो राख्ने विषय आफूहरुमा प्रतिबद्ध रहँदै अब मुलुकको शासणप्रणालीका विषयमा राजनैतिक मतभेदका समस्या केही नरहेको, अब लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र थायित्वप्रति मात्र केन्द्रीत हुनेछौं भन्दै जिल्लामा भइरहेका विकास निर्माणलाई पूर्णता दिँदै आवश्यकता अनुसार विकासका नयाँ प्याकेज ल्याउने केही समयमै दाङ जिल्लामा विकासले गतिलिने, शुभभावनाका विषयहरुमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । हामी जिल्लाबासी भाग्यमानी पनि भएका छौं ।
२ नम्वर क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी हुनुभएका कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुभएको छ भने त्यस्तै यसै क्षेत्रकै प्रदेशसभामा विजयी हुनुभएका शंकर पोख्रेल ५ नम्वर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँहरु जुनसुकै आस्था र विचारमा भएपनि, जुनपार्टीबाट उम्मेदवारी दिएतापनि अहिले उहाँहरु साझा नेताकारुपमा दङाली जनताले लिएका छन् ।
उहाँहरु गरिमामय महत्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ । मुलुकमा दशकौ दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको जनसाधारणको समेत ठम्याई छ । करिव ६ दशक पहिले मुलुकमै पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले दुईतिहाई भन्दा बढि मत प्राप्त गरी विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जनताको सरकार बनेको थियो ।
तर तत्कालिन निरंकुश राजा महेन्द्रले डेढवर्षमै अवैधानिकरुपमा बलात् शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी नै निमुठि दिए । ५७ वर्षपछि अहिले केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जनमुखी सरकार गठन भएको छ । ओली सरकारले पनि दुईतिहाई भन्दा बढि मत प्राप्त
गरेको छ । १५ शालमा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई निरंकुश राजाले अनेक व्यवधान खडा गर्दै अन्तमा सरकारलाई वर्खास्त
गरी यसमा अप्रत्यक्षरुपमा भारतको समेत हात रहेको थियो । ६ दशक पहिलेको मुलुकको परिवेश र वर्तमान समय परिस्थितिमा धेरै नै परिवर्तन भैसकेको छ ।
निरंकुशतन्त्रको नाइके राजसंस्था नै एकदशक पहिले अस्तित्व विहनी भैसकेको अवस्थामा वर्तमान ओली सरकारलाई
अव न भारतको डर, न त निरंकुश तन्त्रबाट अवरोध पु¥याईने कुनै पनि डर न त्राश ! जनसाधारणसमेत राजनीतिकरुपमा धेरै नै सचेत भइसकेका छन् ।
यस्तो अनुकुल अवस्थामा वर्तमान सरकारले जनमतको कदर गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका साथै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रगामी छलाङ लगाउनु पर्दछ । जनसाधारणका इच्छा आकंक्षालाई क्रमशः सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने निर्वाचनमा पार्टीका घोषणापत्र अनुसार चल्नैपर्ने हुन्छ । अब त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नै पर्दछ । त्यसैगरी प्रतिपक्ष दलले पनि विरोधका लागि विरोधमात्र होइन । जनभावना अनुसार रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाको विकास निर्माणको लागि हातेमालो गर्नु प्रतिपक्षको दायित्वभित्र पर्दछ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको परिपेक्षमा नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनले गर्दा अहिले प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको व्यवस्थापन गर्नेक्रममा केही तालमेल मिलि रहेको छैन । क्रमशः यसमा सहजता मिल्दै जानेछ । यसमा सचेत नागरिकहरुबाट सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको मात्रै काम हो भन्ने मानषिकता हटाउँदै आफ्नो पनि केही दायित्ववोध गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार त एउटा माध्यम मात्र हो । जनताको सहयोग नभए, सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन । यस कारणले पनि नयाँ संरचनालाई चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि सचेत नागरिकहरुको कर्तव्य पनि हो । आफ्नो दायित्वबाट कोही पन्छिन मिल्दैन । त्यसैगरी हाम्रा मान्यज्यूहरुको धेरै अपेक्षा पनि दङाली जनतामा रहेको बुझ्न जरुरी छ ।
आदरणीय मान्यज्यूहरु !
दाङाली जनताले तपाईहरुबाट विकास चाहेका छन् । निर्वाचनकाक्रममा तपाईहरुका घोषणापत्रमा उल्लेख
भएका प्रतिबद्धतापत्रहरु अनुसार विकासे योजनाहरु चाहेका छन् । त्यसमा तपाईहरु अब कम्मरै कसेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । हुनत विकास भनेको सिमिति समयमै हुने होइन ।
कुनै पनि योजना कार्यान्वयनका लागि धेरै नै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हून्छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयको आवश्यकता रहन्छ । मन्त्रालयहरुमा एउटा फाँटबाट अर्को फाँटमा फायल जान महिनौ दिन लाग्छ । कहिले काँही त फाइल नै हराइन्छ पनि । कर्मचारी तन्त्रको भरपर्दा, योजना नै तुहिएका पनि छन् ।
एक ठाउँको बजेट, अर्को ठाउँमा चलाखीपूर्वक सारिन्छ । यस्ता अनेकौ गयर जिम्मेवारी व्यवधानहरु आइपर्दछन् । यसका लागि मान्यज्यूहरुको विशेष भूमिका रहेमा योजनाले समयमै सार्थकता पाउँछ । तर दुर्भाग्य, मान्यज्यू साथै मन्त्री महोदयहरुको विकासप्रतिको लगाव फिका नै रह्योकीत ? एकले अर्कालाई दोष लगाउँदै पन्छिने, राजनीतिक रङ दिँदै उम्किने प्रवित्तिले जिम्मेवारी निभाउनमा कञ्जुस्याइँ भएको देखिन्छ ।
निर्वाचनमा जनताले विजय बनाएका आदरणीय नेताज्यूहरुको टिकाटिप्पणी गर्नु मनासिप हुँदै होइन । तरपनि हाम्रैमतले हामीले नै विजय गराएपछि हाम्रो अधिकार पनि रहन्छकी ? हाम्रा नेताहरुले जनभावना अनुसारको कार्यकौशलतामा खरोरुपमा उत्रिन नसकेको अवस्थामा वाध्य भएर लेखका माध्यमबाट गुनासो र सुझाब दिएको छु ।
गुनासो पोख्नुका विषय त धेरैछन् । तर केही विषय टड्कारोरुपमा रहेको हुँदा जनभावनालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । जस्तो लमही घोराही, तुलसीपुर सडक खण्डको कुहिरे पानीको बबई नदी देखि तुलसीपुरसम्मको सडक र पुलहरुको दुरावस्थाको विषयमा ः
सरकारले ठेक्का दियो, ठेकेदारले ठेक्का पायो । तर निर्माणाधिन कामले गति लिन सकेन । घोराही र तुलसीपुर बजारका केही एरियामा सुरुवाती खनखोरस भएको छ । तर निर्माणको गति आँख मिचौनी जस्तो छ ।
धुलोले बजारका केही क्षेत्रमा जन साह्रै पीडित छ्न । कटुवा खोलाको पुल, दुईवर्ष पहिले नै बनि सक्नु पर्ने थियो । तर बनेन । त्यसमा ठेकेदारलाई दोषदिएर मात्र पन्छिन मिल्दैन । समयमै बजेट निकासा गर्ने, सहजीकरणको भूमिकामा मान्य र मन्त्रीज्यूहरुको होइन
र ? सडक विभाग र ठेकेदार अथवा मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने र परिआएमा दवाव दिनुपर्ने होइन र ? वषौसम्म जनतालाई धुलो खुवाउनुमा के तपाईहरु पनि केही मात्रामा भएपनि किन गैरजिम्मेवार हुनुभएको छ त ? त्यसैगरी दाङकै गौरवको विषय राप्ती स्वास्थ्य विज्ञानप्रतिष्ठानले गति लिन सकेको छैन ।
कसैको निहित स्वार्थमा प्रष्ठिान जस्तो गैरराजनीतिक संस्था जो पवित्र उद्देश्य रहेको यस क्षेत्रकै दिर्घकालिन महत्व रहेको विषयलाई कतै राजनीतिक रंग दिइँदैत छैन ? होइन भने आदरणीय मान्यज्यूहरु तपाईहरुले मौनता साँध्नुको कारण के हो ? यस विषयमा पुरै जानकार हुँदाहुँदै पनि समस्या समाधानतिर नलागी हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति किन ? अघिल्लो देउवा सरकारले ०७४÷०७५ का लागि ७८ करोडको बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ ।
त्यस्तै वहुवर्षीय योजनामा १४ अरबको प्रस्तावलाई क्याविनेटबाटै मन्जुरी गराई सकेको अवस्थामा त्यसतर्फ पहल नगरी उपकुलपति र कावा मेसुको बीचमा मल्लयुद्ध रचाएर तमासे किन ? अबको दुईमहिनाभित्रनै नयाँ बजेट आउने हुँदा अब बिबादका कारण राप्ती स्वास्थ्य विज्ञानप्रतिष्ठनले बजेट नपाउन सक्दछ । विशेषज्ञ डाक्टरहरु पनि नआउन सक्छन् ।
स्वास्थ्य उपचारका साथै पठनपाठनको विषयमा अबरोध सिर्जना भैरहनेछ । कतै अब प्रतिष्ठान धरापमा पर्ने त होइन ? अन्तमा मान्य, सम्माननीय, आदरणीय सबैमा बिनम्र अनुरोध यो छकी राप्तीकै विकासका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको असहज अवस्थालाई सहजताका लागि दलिय स्वार्थको घेरा तोड्दै एकजुट हुँदै प्रतिष्ठानको गतिलाई तिब्रगतिमा अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन । हैन भने माछो–माछो भ्यागुतो ।